လျှာလည်ပြီးထမင်းမြိန်စေမယ့် နွေမိုးဆောင်း ….. – FoodiesNavi
လျှာလည်ပြီးထမင်းမြိန်စေမယ့် နွေမိုးဆောင်း …..
By yin sandi On January 15, 2018 0
မနက်စာနဲ့နေ့လည်စာ ? ? ☕️ ? ကောင်းကောင်းစားနိုင်မယ့်ဆိုင်ကို ရှာဖွေနေပြီလား??? ဒါဆိုရင်တော့ Foodies Navi ကနေ စားချင်စဖွယ်မနက်ခင်းအစားအစာနဲ့ ? ? ? ? ထမင်းမြိန်ဖွယ် မြန်မာထမင်းဟင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ ? ? နွေမိုးဆောင်းမြန်မာစားသောက်ဆိုင်လေးကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ နွေမိုးဆောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း သုံးရာသီလုံးအရသာထူးကဲကောင်းမွန်ပြီး မနက်စာ/နေ့လည်စာအတွက် အမြဲစိတ်ချယုံကြည်စွာ စားသုံးနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့-?
-No.(170,176) , MGW Centre , Bo Aung Kyaw Street , Botahtaung Township , Yangon .
နွေမိုးဆောင်းမြန်မာစားသောက်ဆိုင်မှာတော့ မနက်ခင်းစာဖွယ်ရာတွေဖြစ်တဲ့ ? ? ? ? နန်းကြီးသုပ် ၊ နန်းကြီးသုပ် ၊ ခေါက်ဆွဲသုပ် ၊ မန္တလေးထမင်းသုပ် ၊ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ၊ ထမင်းကြော်(ကြက်၊အမဲ၊ကြက်ဥ) ၊ဆိတ်သားစမူဆာ၊စမူဆာသုပ်၊ပူရီ၊ချာပါတီသုပ်၊တိုရှည်၊မလိုင်၊နံပြား၊ပဲနံပြား၊နံပြားထောပတ်သုတ်၊ပြည်ပလာသုတ်၊ကီးမားပလာတာ၊ငှက်ပျောပလာတာစတဲ့လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်တဲ့မနက်စာအပြင် ထမင်းမြိန်ဖွယ်မြန်မာ့ဟင်းလျာတွေဖြစ်တဲ့ ? ? ? ? ? ကြက်အာလူးဟင်း၊ကြက်ဘူးသီးဟင်း၊ကြက်အသဲအမြစ်ဟင်း၊ကြက်သားလုံးကြော်၊ဆိတ်ပဲဟင်း၊ဆိတ်ဦးနှောက်၊ဆိတ်မွှကြော်၊ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန်၊ငါးမြင်းဆီပြန်၊ငါးခူကြော်၊ငါးကြင်းကြော်နှပ်၊ငါးသလောက်ပေါင်း၊ငါးရံ့အူ၊ငါးရံ့ဒန့်တလွန်ဟင်း၊ဘဲဥသီးစုံဟင်း၊ငါးဖယ်သုပ်စတဲ့ အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းစားနေရသလို သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအရသာကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းလျာတွေကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။?‍♀️??‍♂️
ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်? ? သွားလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှာပါ။ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေကြောင့် သက်တောင့်သက်သာစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အပြင်အဆင်ကြောင့် စားသုံးသူတွေကိုစိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ။ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့စားဖိုမှူးကြီးတွေကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တာကြောင့် ? ?အရသာကတော့လျှာလည်သွားမှာ အသေအချာပါပဲနော်။???
Image Source : www.facebook.com/နွေမိုးဆောင်းစားဖွယ်လက်ရာမွန်
In Restaurant Guides Tagged Myanmar curries, Pu Ri, Salads, tea Leaveacomment
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အရသာထူးခြားတဲ့ ရိုးရာအစားအစာတွေရနိုင်တဲ့………
ချိုချဉ်ငံစပ်ထုံ အရသာစုံတဲ့ Jo Jo Hot Pot